Door Accessories, Automatic Door Kits, High Speed ​​Door Accessories Manufacturers uye Suppliers muChina
Tsanangudzo:Door Accessories,Automatic Door Kits,High Speed ​​Door Accessories,Sliding Door Operator,,
Zvigadzirwa zve Door Accessories , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Door Accessories , Automatic Door Kits vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve High Speed ​​Door Accessories R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
High Performance Automatic Sliding Door Opener Operator Bata Ikozvino
Servo Motor And Control Box Kubva Pakuvhura Nyore Bata Ikozvino
Hofic Automatic Door Motor uye Control Box Bata Ikozvino
Automatic Door Servo Motor And Control Box Bata Ikozvino
Servo Motor uye Control Box Bata Ikozvino
Automatic Door 50HZ-60HZ Servo Motor uye Control Box Bata Ikozvino
50HZ-60HZ Servo Motor uye Control Box For Door Bata Ikozvino
Chengetani yeAgeghovha Yokuchengetedza Kwekukurumidza Kupinda Mushoni Using Bata Ikozvino
System Mota uye Servo Controller Bata Ikozvino
Automatic High Speed ​​Door Radar Bata Ikozvino
Automatic Fast Door Induction Radar Bata Ikozvino
Automatic Fast Door Radar Bata Ikozvino
24GHz Automatic Door Radar Bata Ikozvino
Electronic 24GHz Automatic Door Radar Bata Ikozvino
High Speed ​​Door Servo Motor Suppliers Bata Ikozvino
Rambai Muchivanze Muchidimbu Servo Brushless Motors Bata Ikozvino
Remote Control Automatic Sliding Door Operators Bata Ikozvino
High speed door ac servo motor 220v Bata Ikozvino
Automatic Sliding Door Servo Motor Bata Ikozvino
Svondo rinosvitsa Mushandi weDenho Bata Ikozvino
Door accessories inosanganisira automatic door kits, high speed motor motokari uye bhokisi rinodzora, guru rinopinda masuo, mamwe magedhi. Tinokwanisa kutengesa chero zvikamu zvezvinhu izvi.
Automatic kits kits: Yedu yemagetsi kits dzinosanganisira 1 motor + gear reducer, 1 bhanhire, 7 mita, 1 pulley isina kusimba, Microprocessor, 4 masitadhi emotokari mabhuruu, 2 setsheni dzepasi, 2pcs remote control, 2 seti belt clamp kuvhara mabhati , 1 simba supply harness uye cable connectors, 2 locator, Aluminium track iyo yakareba 2.08 mamita, mamita matatu, kana mamita mana. Isu tiri mugadziri wevashandi vekuvhara magedhi anogadzirwa kuti agone kupa vanhu nyore. Automatic Door Systems` motokari yekupa iyo yero yebasa ndeimwe yezvikonzero zvinoita kuti mikova inowedzera yakawanda inowanzozivikanwa. Zvatinoita zvishoma nezvishoma kushandura magonhi emagetsi zviriko mazuva ano, kuponesa nzvimbo uye kunakidza. Kushongedza masuo emasuo ane maitiro makuru ezvimwewo zvinosanganisira: maitiro ega-oga uye yakazara kuzarura upamhi uye / kana kuderedzwa kuzarura upamhi, uye kubva kunze kwekutonga kwemugwagwa. Kuvhurwa kwemasuo okugadzirira kunogonawo kugadziriswa kuita kuti upamhi huve hudiki kana kuti hukuru. Zvinhu zvakakosha zvekuchengetedza zvakadai sekuchengetedzwa kwemagetsi zvinodzivirira musuo kuti urege kuvhara kana vanhu kana zvinhu zviri munzvimbo yekucherechedza. Kana masuo emasuo akadzivirirwa paanovhara, anobva avhurwa zvakare kana kana masuo emasuo akadzivirirwa paanovhura, anobva atomiswa nekuchengetedzwa kwekuzvidzivirira kushandura.
high speed door motok uye control box: Kambani yedu ine German SeW Motor, Japan Mitsubishi Controller. Cheki chedu Chekuita servo motokari uye mutongi. Chinese chinonzi brand SEJ motor uye Holip controller. ChiGerman SEW Motor uye Japan Mitsubishi Controller: Zviri nyore kuwana motokari yakagadzirisa simba yekushandisa kwako pane SEW. Sangano redu rinosungirirwa servo control system rakakodzerwa nekukurumidza nekukurumidza kushandiswa kushandiswa kwakanyorova uye kwakaoma gedhi rakagadzirwa. Izvo zvose zvese zviri mune zviduku uye zvishoma, zvinenge zvakakura uye zvinokurumidza kushanda, pfuti shoma, kutendekera kwakakwirira, kushandiswa uye kushandiswa kwemapuranga, yakakodzera kukwirira nekushandiswa kwemamiriro ezvinhu. SEJ motokari uye Holip controller: Matatu-phase asynchronous motokari uye magnetic brake inoshandiswa zvakanyanya, Inofanirwa nemhando dzakasiyana-siyana dzemotokari huru uye motairi anobatsira, uye inoshandiswawo zvakasiyana-siyana zvinoda kumira nokukurumidza nekugadzirisa maitiro.
high speed door accessories: Driving system: High speed door Servo System motor uye kutonga, motokari SNMA / SEJ + reducer + flang + encoder + control box. Zvimwe zvishandiso: Pakati pealuminiyamu bar, pasi pealuminium bar, aluminium vertical track, sinai-sinai vertical track, mabhurusi, round nylon strip, PVC roll, kuburitsa steel tube yakakwana, drum be ;; s for rolling tube, side end covers, , michina inotapira, air bag sensor system, mhepo yakachengetedzwa, bundu rekudzivirira, microwave sensor 24 Gigahertz, PVC kushambadzira mhepo, utsi nemoto zvinokonzera moto, PVC ziso resoko, magnetic loop, .
Mimwe gedhi rekushandisa: Chikamu chechikamu chekushandisa: motokari 220V-380V, bhokisi rekudzivirira, chipfuti chemvura yakasununguka, kambani kamuti kambani, aluminiyumu alloy rope pulley, yakasimbiswa shaft bracket, air bag system, duplex yakasimbiswa motokari gorosi.
Nezvimwe zvinhu tsanangudzo tsanangudzo, tapota ngwarira kutarisa tsanangudzo yedu.
Door Accessories Automatic Door Kits High Speed ​​Door Accessories Sliding Door Operator Other Door Accessories